Chee echiche maka ya Otu esi ezere ọdachi ihu igwe, nke Bill Gates dere
Akụkọ a adịchaghị mma n'anya ogologo oge, ọbụnadị na ngalaba egwuregwu (maka onye na -amu amu Ezigbo Zaragoza n'elu ihe niile). Na, njakịrị n'akụkụ, okwu ijikọ ụwa ọnụ, mgbanwe ihu igwe nke nwa nwanne sayensị Rajoy gọnarị, na nke a nje Corona na -enwe obi ụtọ na -atụgharị ma na -akawanye njọ, ọ dị ka ọ bụ nkwekọrịta n'etiti Malthus, Nostradamus na ụfọdụ onye ọchịchị Mayan.
N'ime ihe ndị a na -abịa Bill Gates, onye na -enyere ndị mmadụ aka na -elekwasị anya na ụfọdụ n'ime ndị na -akwado plandemics na ndị ọzọ, ma na -ewetara anyị akwụkwọ nwere ntuziaka kachasị ọhụrụ iji lanarị ọdachi nke anyị ji okwukwe kpuru ìsì were. igbu onwe onye. Ee, okwu ahụ yiri ihe siri ike n'ihi inertias nke na-ebibi onwe ya mmepeanya anyị ugbu a, na -arịa ọrịa ịgba chaa chaa dị ka ntọala nke akụnụba ọ bụla, yana nwata na nzuzu karịa ka ọ dị na mbụ. N'agbanyeghị, ma ọ bụ kpomkwem n'ihi nke ahụ, ọ bụ oge ige Gates ntị ...
Bill Gates ejirila afọ iri nyocha mgbanwe ihu igwe. N'ịbụ ndị ndị ọkachamara n'ihe ọmụmụ physics, kemistri, bayoloji, injinịa, sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ego na -eduzi ya, ọ gbadoro ụkwụ n'ịchọpụta ihe anyị ga -emerịrị iji kwụsị ọsọ ụwa na ọdachi gburugburu ebe obibi na -enweghị mgbagha. N'ime akwụkwọ a, ọ bụghị naanị na onye edemede na -achịkọta ozi bụ isi iji mee ka anyị mara mkpa ọ dị iwepụ ikuku anwụrụ ọkụ, kamakwa kọwaa ihe anyị ga -emerịrị iji nweta ebumnuche a dị mkpa.
Gates na -enye anyị nkọwa mara mma banyere nsogbu ndị anyị na -eche ihu. N'iji ihe ọmụma ya na ihe ọhụrụ na ihe ọ pụtara iwebata echiche ọhụrụ n'ahịa, ọ na -akọwapụta mpaghara nke teknụzụ na -enyere aka ugbu a iji belata ikuku anwuru ọkụ, otu na mgbe teknụzụ nke ugbu a ga -esi dị irè karị, ebe anyị chọrọ ụdị ọganihu a. na onye na -arụ ọrụ na ndozi ndị a dị oke mkpa.
N'ikpeazụ, ọ na -akọwapụta atụmatụ dị mma yana nke akọwapụtara iji ruo ikuku efu, ma site na amụma gọọmentị yana n'ike onwe, si otu a tinye gọọmentị, ụlọ ọrụ na onwe anyị n'ọrụ a dị mkpa. Dị ka Bill Gates dọrọ aka ná ntị, imezu ebumnobi efu efu agaghị abụ ọrụ dị mfe, mana ọ ga -eru anyị aka ma ọ bụrụ na anyị agbasoro ntuziaka ya.
Ugbu a ị nwere ike zụta akwụkwọ "Otu esi ezere ọdachi ihu igwe: Ngwọta anyị nwere ugbu a na ọganiihu anyị ka chọrọ" nke Bill Gates, ebe a.
Tags Bill Gates, Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Akwụkwọ sayensị
1 kwuru na "Otu esi ezere ọdachi ihu igwe, nke Bill Gates dere"
Pingback: Otu esi ezere Ọdachi ihu igwe nke Bill Gates « Raul Barral Tamayo's Blog